Nvidia ee dib loo habeeyay RTX 2060 GPU wuu ka dhaqso badnaan karaa sidii la filayey - 【Comparison】 2022
Nvidia dib loo habeeyay ee RTX 2060 GPU waxay noqon kartaa ka dhakhso badan sidii la filayay
Jikada noloshaada: 950 cunto fudud, degdeg ah oo caafimaad leh (Kitchen Planet)
Arguiñano, Karlos (Qoraaga)
Nvidia's RTX 2060 cusub ayaa lagu xamanayaa inuu yahay sarakicidda tan ka xoog badan kaarka sawirada Turing ee la filayo, marka loo eego mala-awaalka ugu dambeeyay.
Markii hore, waxaa la isla dhex marayey in farqiga kaliya ee u dhexeeya RTX cusub 2060, ilaa inta uu jiro oo la bilaabayo Diseembar 7 sida la qorsheeyay, uu noqon doono inuu labanlaabo VRAM ka 6GB ilaa 12GB.
Hadda VideoCardz ayaa leh, oo waydiistay xaqiijinta saddex ilo oo kala duwan, laakiin waa inaan sii wadnaa shakiga xanta ah, dabcan, in RTX 2060 ee soo socota aysan ku socon doonin oo kaliya 12GB, laakiin sidoo kale waxay kordhin doontaa tirada CUDA cores ilaa 2. 176. In aan ku dhejin lahaa RTX 2060 Super oo si cad u noqon lahayd kor u qaadis fiican oo heerkeeda awoodeed (xusuusnow asalka RTX 2060 wuxuu ku orday 1.920 cores).
Waxa kale oo ay yeelan doontaa TDP (isticmaalka korantada) ee 184W, kaas oo runtii waxyar ka badan kan 175W ee RTX 2060 Super isticmaalo. Saacada kor u qaadista waxaa loo dejiyay 1650MHz si caadi ah, iyada oo mareysa ugu yaraan laba ilood.
Soo jiidashada ayaa ah in RTX 2060-ka la cusboonaysiiyay ay tahay inay u dhiganto kii hore ee 2060 Super, laakiin leh awood waxyar ka sarreysa iyo baaxadda xusuusta hoose (192-bit, halkii 256 Super's 2060-bit baska).
Dib u eegis: dheelitirnaanta GPU jilicsan ee Nvidia
Tani waa su'aal xiiso leh oo la siiyay in xanta ku saabsan RTX 2060 cusub ay socotay muddo hadda, dhammaantood waxay ku adkaysanayaan inay ilaalin doonto isla faahfaahinta asalka ah ee 2060, marka laga reebo nuqul ka mid ah VRAM. Hadda, iyadoo la filayo inay soo dhowdahay, sida la sheegay, khariidadda la cusboonaysiiyay waxay si aragti ahaan imaan doontaa usbuuca soo socda, waxaan ogaanay inay aad ula jaan qaadi karto 2060 Super, ama ugu yaraan aad u dhow.
Tani waxay u muuqataa waxoogaa la yaab leh iyadoo la tixgelinayo inay keeni doonto wax qabad ku dhow kan RTX 3060, kaas oo, sida VideoCardz tilmaamay, kaliya ku dhawaad ​​​​8% ka dhakhso badan RTX 2060 Super.
Waxaan u maleyneynaa inay jirto farqi aad u weyn oo u dhexeeya 2060 cusub iyo RTX 3060, gaar ahaan tixgelinta in Nvidia ay qorsheyneyso mashiinka RTX 3050 nooc ka mid ah, taasina waa inay ku haboon tahay khadka guud sidoo kale. Waxba lagama saari karo, dabcan, xantan cusubna waxay si fiican ula socotaa sheegashadii shalay ee ah in aragtida RTX 3050 ay dabcan ka gaabin doonto dib u habeynta 2060.
Haddii dhammaan kaadhadhkan ay u imanayaan sida xanta ah, waxay noqon doontaa fal dheellitirnaan adag si loo ogaado halka ay ku habboon yihiin cabbirka awoodda Nvidia ee GPU. In kasta oo waqtigan, si kasta oo ay kaararkani u dhaqso badan yihiin, ciyaartoydu waxay u badan tahay inay si farxad leh u qaataan wax kasta oo la siiyo marka loo eego heerar ka wanaagsan oo si sahlan loo isticmaali karo kaydka GPU ee casriga ah.
Heshiisyada kaararka sawirada ugu fiican xilligan